WedzeraThis Inowedzera Yega Targeting Kuvandudza Engagement, Shanduko uye Revenue | Martech Zone
WedzeraThis Inowedzera Yega Targeting Kuvandudza Engagement, Shanduko uye Revenue
China, December 4, 2014 Douglas Karr
Mazhinji etekinoroji yekushambadzira epasirese yakanangana nekushanyirwa. Link baiting iri kunze kwemachati uye zviri kukonzera mhedzisiro inotyisa yevatengesi. Kuunza mumwe munhu kune yako saiti kuri nyore nyore, asi kuvachengeta imomo uye kunyatso kuvakurudzira kuti vaite bhizinesi newe kwakaomarara. Kunyangwe pane chinyorwa senge chedu, kuwedzera kwedu kuona kwakakosha - asi kunze kwekunge vanhu vachitaurirana nemhando dzatiri kutaura nezvazvo, zvese hazvina basa.
Isu tinofanirwa kusvika kune vateereri vanozove vanofarira zvemukati medu - uye kana tangovaendesa kune yedu saiti, isu tinofanirwa kushanda nesimba kuti tizvichengete pane ino saiti kana kupa nzira yekuti vaite zvimwe. Isu pachedu tinoita izvozvo nemipiro yekunyorera uye inoenderana nepositi kurudziro padanho rakakura.
WedzeraThis iri kushandisa simba remabhirioni evashandisi ayo asvitswa kupa ivo pachavo zvakanangwa zvemukati kuchengetedza vashanyi vako vachiita neyako saiti. Yakagadzirirwa kubatsira varidzi vewebhusaiti kuwedzera nguva iyo mushandisi anoshandisa pane yavo saiti nekuratidzira zvemukati uye zvinopihwa zvinoenderana nezvinodiwa zvavo.
Kana webhusaiti yako iine kekutanga mushanyi, iwe hauzive izvo zvinoshanyirwa nemushanyi kana zvaachabaya. Asi AddThis inotoziva zvido zvemushandisi uye zvido zvake zvichibva pane zvavakaita zvekare pane mamwe maAdhisiti. Iye zvino yako saiti inogona kunongedza zvemukati, zvigadzirwa kana zvinopihwa zvichibva pane yapfuura nhoroondo yemushandisi.
Unogona kumisikidza kunongedza zviri nyore mukati meAdThis:
Uye iwe unogona kuyera shanduko zviri nyore kuburikidza neAdhishibhodhi redhibhodhi:
Aya mashandiro aimbove aingowanikwa kune vashambadziri uye vaparidzi vekupedzisira. WedzeraThis iri kuiwedzera yemadhora gumi nemaviri / mwedzi sechikamu cheAddThis Pro kunyorera, ichiita kuti ive inodhura kwazvo.
Tags: wedzeraaddthis zvemukati zvinokurudzirwazvemukati zvinokurudzirwazvemukati zvakanangwakunatsiridza mwero wekushandurwakunatsiridza kubatanidzwakunatsiridza mariwedzera kutendeukawedzera kubatanidzwawedzera marichengeta vashanyimunhu zvichienderana kugutsikanachengetedza vashanyi